Musuq-maasuq: Lacagtii ay Barcelona ku iibsatay Neymar Oo Noqotay €158 Milyan
HomeSpainMusuq-maasuq: Lacagtii ay Barcelona ku iibsatay Neymar Oo Noqotay €158 Milyan
Heshiiska Barcelona iyo Santos ayaa markii hore ku bilaabmay sidii la shaaciyey in ciyaartoyga Neymar la kala siistay €17.1m, hase ahaatee wax waliba way is beddeleen. Hadda marka la isku geeyo wadarta lacagta Barcelona kaga baxday ciyaartoygan, waxa uu noqonayaa ninka dunida ugu qaalisan ee ay kooxi ku iibsatay lacag intaas le’eg. Waxa ay noqotay isku-geynta lacagta Barca kaga baxday Neymar €158 Milyan.
Tirada lacagta ee marba soo baxaysa ayaa kor u sii kacaysa, inyar kadib markii uu Neymar ka degay Barca waxa soo baxday hadal haynta suurtogalnimada in Neymar oo kubaddiisu wanaagsan tahay ay ku iibsan karayaan lacag yar oo ah €17.1 milyan, laakiin Barca ayaa sirteeda dibedda soo dhigtay, waxaanay sheegtay in €40milyan oo kale ay siisay aabbaha dhalay Neymar taas oo loo siiyey markii uu waayey xuququuqdiisii uu u lahaa in uu wiilkiisa ka iibiyo kooxda uu doono. Wadarta lacagta ayaa markaas noqotay €57miilyan.
Halkaas iyadoo maraysa ayey shirkadihii uu heshiiska kula jiray Neymar iyo waliba kooxda Santos waxay muujiyeen shaki iyo waliba in ay Barca ku dacweeyaan xuquuqdii ay u lahaayeen ciyaartoyga in ay iibiyaan oo aan sideedii loo fulinin, isla markaana shirkad lahayd qayb ka mid ah xuquuqda Neymar meeshaba laga saaray, taasina ay maxkamadda ka furatay dacwad.
Maxkamad ku taalla dalka Spain ayaa iyaduna ku xukuntay Barca in ay bixiso lacag dhan €13.5milyan oo cashuurta Neymar ah, taas oo marka loo geeyo tiradii hore kor u sii qaadday.
Baadhitaanno kale oo la sameeyey ayaa iyaguna kashifay in ay jiraan lacago kale oo naadigu ku bixiyey ciyaartoygan, taas oo marka la isku wada geeyo noqonaysa €158milyan. Tiradani waxay saddex jeer ka badan tahay intii ay markii hore Barcelona soo bandhigtay, waxaanay Neymar ka dhigaysaa ciyaartoygii ugu qaalisanaa taariikhda kubadda cagta.
Leicester Oo 8 Dhibcood Oo Nadiif Ah Hogaanka Ku Qabatay Kadib Xasuuqii Swansea + Sawiro
Tirada Wasiirrada Is Casilay Oo Kor U Sii Kacaysa Iyo Siilaanyo Oo Cidlo Taagan
Henry, Martial, Murray iyo Rues Oo Ka Hadlay Naxdin Ay Ka Qaaday Weerarka Paris
14/11/2015 Abdiwahab Ahmed